Shir looga hadlayay maamul wanaaga iyo geedi socodka dimuqraaiyadda Puntland oo Garoowe lagu soo gabagabeeyay. – Radio Daljir
Shir looga hadlayay maamul wanaaga iyo geedi socodka dimuqraaiyadda Puntland oo Garoowe lagu soo gabagabeeyay.
Febraayo 14, 2012 12:00 b 0
Garowe,Feb 14 -Kulan looga hadlayay maamul wanaagga,baahinta maamulka iyo hirgalinta dimuqraadiyeenta Puntland ayna ka qaybqagaleen gudoomiyayaasha gobolada iyo degmooyinka Puntland ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland.
Kulanka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Puntland ayaa waxaa diiradda lagu saaray horumarinta mashruuca JPLG oo ay dowladda Puntland iyo hay’adaha QM ay ku hormarinayaan degmooyinka ku guulaysta hirgalinta goloyaasha deegaanka.
Agaasimaha guud ee wasaaradda arimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Puntland Cabdulaahi Saciid Aw-Yuusuf oo waraysi siinayay Radio Daljir ayaa waxaa uu sheegay shirkaan in waxyaabihii kasoo baxay oo ay ka mid tahay hirgelinta dimuqraadiyadda iyo maamul baahinta la gaarsiin doono deegaanada miyiga ee Puntland,si shacabka ay mustaqbalka dhow uga qaybqaaataan doorashooyinka madaxtinimo iyo kuwa xisbiyada ee la filayo inay Puntland ka qabsoonto sanadaha soo socda.
Shirarka looga hadlayo baahinta maamulka iyo maamul wanaagga ayaa waxaa ay gundhig u tahay siysaadda xukuumadda madaxwayne Cabdiraxmaan Faroolle oo horay u balanqaaday inay ka shaqayn doonto nidaamka xisbiyada badan ee Puntland in lagu hirgaliyo bilaha inagu soo fool leh.
Duqaynta magaalada Ximsi ee dalka Suuriya oo sii socota
Marka Bowden oo sheegay in ay ka qayb qaadanayaan dib u celinta barakacayaasha ku sugan Muqdisho